Ma Ogtahay in Chelsea ay CALANKA u sido Yurub!!?? – Gool FM
(Europe) 09 Nof 2018. Naadiga Chelsea ayaa Calanka u sida Shanta horyaalka ee ugu sarreysa Yurub kaddib guul daradii ay Juventus dhawaan kala kulantay kooxda Manchester United tartanka Champions League.
Blues ayaa ah kooxda kaliya ee aan wax guul darro ah dha-dhamin ilaa iminka xilli ciyaareedkan 5-ta horyaal ee ugu waa wayn qaarada Yurub inkastoo aysan qeyb ka ahayn Champions League maadaama ay ciyaareyso Europe League.
Juve iyo Chelsea ayaa ahaa labada kooxood ee aan wax guul darro ah arkin dhammaan tartamada kal ciyaareedkan, balse habeenkii Arbacada ayaa la biyo cabsiiyay kooxda reer Talyaani.
17-kulan ay ciyaartay kooxda Sarri dhammaan tartamada kal ciyaareedkan ma aysan arag wax guul darro ah.
Manchester City iyo Liverpool sidoo kale lagama adkaan horyaalka Premier League balse guul darrooyin ayay dhadhamiyeen tartanka Champions League.
"Weligeey ma Arag Ronaldo oo kale.".